Apple inopa tambo yeApple vashandi vakapedza iro Dambudziko rekuita | Ndinobva mac
Uye ndeyekuti munaFebruary wapfuura vashandi veApple vaive neApple Watch pamaoko avo, vaive nebasa rekuita kuti vazadzise: vhara zvindori zvese pazuva rega raFebruary. Avo vakabudirira, ivo vari kuwana mubairo muchimiro chetambo yenylon, iyo iri kusvika kudzimba dzavo uye ivo vari kuiburitsa pane avo masocial network.
Aya marudzi ezvinetso anonakidza chaizvo kune vashandisi uye zviri pachena zvakare kune vashandi avo, vane mibairo yakaita seiyi, havangafunge kaviri kana vachiedza kuita aya matambudziko akataurwa naCupertino. Izvo zvakare zvinonakidza kune kwedu chiitiko chemuviri uye nekuda kwechikonzero icho mubayiro wakapetwa, zvese mu hutano hwedu semubairo.
Chipo chevashandi neApple Watch
Kunyangwe muchiitiko ichi chiri chinhu chemukati, sezvo chipo chiri chevashandi vefemu chete (hatina chokwadi kuti vamwe vanozoonekwa ne eBay munguva pfupi) matambudziko anotsanangurwa neApple anogara achitambirwa nevashandisi uye chikonzero chiri nyore yekupedzisa mhete pane wachi inoita kuti vese vashandisi vakungirire pakuwana kurovedza muviri.
Mune ino kesi ndeye tambo yekutarisa, muchirongwa chakapfuura zvipo zvaive T-shati uye matatu miti yemipaini ine Activity mhete asi mune ino kesi chipo chinogona kunge chiri chimwe chinhu chiri nani kune vazhinji, sezvo iri tambo yakasarudzika. Sezvatakakurukura muchirongwa chekare, tinoda kuti kambani iwedzere mubairo uyu kune vamwe vashandisi, asi izvi hazvigoneke kana zvisingaiti. Chero zvazvingaitika Makorokoto kune avo vane rombo rakanaka vanokunda dambudziko iri uye mubairo unotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inopa leash yevashandi veApple vakapedza iyo Dambudziko rebasa